राष्ट्रपतिले 'मेरो सरकार' भनेपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्य- समाचार - कान्तिपुर समाचार
राष्ट्रपतिले 'मेरो सरकार' भनेपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्य
नीति तथा कार्यक्रममा २१ स्थानमा 'मेरो सरकार'
काठमाडौँ — सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्‌मा पेस गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 'मेरो सरकार' भन्ने उच्चारण गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना र व्य‌ंग्य सुरु भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले लिखित मन्तव्यमार्फत् सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेकी हुन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको लिखित मन्तव्यमा पनि 'मेरो सरकार' भन्ने वाक्यांश उल्लेख छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले २१ पटक मेरो सरकार उच्चारण गरेकी थिइन्।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले भने गणतन्त्रमा पनि राष्ट्रपतिले नेपाल सरकार नभनेर मेरो सरकार भनेकोमा आपत्ति जनाएका छन्।कसले के भने?
ट्वीटरमा कसले के भने पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
प्रकाशित : वैशाख २०, २०७६ १८:२५
विस्तृतमा पढ्नुहोस् सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले करिव १ घण्टा ५० मिनेट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पढ्न लगाइन् । ४६ पेज लामो नीति तथा कार्यक्रममा सरकारका महत्वकांक्षी साथै पुरानै योजनाहरु समावेश गरिएको छ ।
४१.समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्षमा हासिल गरिएका उपलब्धिहरूको जगमानेपालको संविधान, पन्ध्रौं योजना र जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई केन्द्रमाराखी मेरो सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७को नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तावगरेको छ। यी नीति तथा कार्यक्रमहरू समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्‍ट्रियआकाङ्‍क्षा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित छन्।
६४.बीस लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ सन् २०२० मा नेपाल भ्रमणवर्ष अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकाभित्रको मौलिक संस्कृति,परम्परा, संगीतको प्रवर्द्धन गर्न रात्रिकालीन काठमाडौं उपत्यका सम्पदा यात्राकार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
६९.सदुपयोगको सिद्धान्तबमोजिम सबै प्रकारका जमिनको पूर्ण उपयोग गर्दै माटो रमौसम अनुकूल खेती प्रणाली विकास गरिनेछ। नदी किनारका जमिन, राजमार्गका सडक किनारा तथा खेतबारीका कान्लाहरूमाफलफूलका खेती गरी फलफूलको उत्पादन बढाइनेछ। विश्‍वविद्यालय, विद्यालयलगायत सार्वजनिक निकायमा प्रयोगविहीनअवस्थामा रहेका जमिन उपयोगमा ल्याइनेछ।
७५.बहुउपयोगी वन र ब्लक फरेष्‍ट विस्तार एवं वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वनसंरक्षण तथा वनस्रोतको दिगो उपयोग गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षारोपणवर्ष घोषणा गरी काष्‍ठ, गैरकाष्‍ठ तथाफलफूलका बिरुवा रोपण गरिनेछ। जडिबूटीलगायत वनमा आधारित हरित उद्योग तथा व्यवसायकोप्रवर्द्धन तथा विस्तार गरिनेछ।
८५.नेपालीको आफ्नै पानीजहाजमा यात्रा गर्ने चाहना छिट्टै पूरा हुने अवस्थामापुगेको छ। पानीजहाज कार्यालय स्थापना भई पानीजहाज सञ्‍चालनका लागि आवश्यक नीतिगत,कानुनी र अन्य पूर्वाधार तयारी भइरहेको छ। जलमार्ग र समुद्रमा नेपाली झण्डा भएको पानीजहाज सञ्‍चालनमाल्याइनेछ।
८९.मेरो सरकारले सबै उमेरका नेपाली नागरिकको सामाजिक संरक्षणका लागिबाल्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण,युवावस्थामा सीप, उद्यमशीलता र रोजगारी तथा ज्येष्‍ठ नागरिकलाई सम्मान, संरक्षण रसुरक्षा प्रदान गर्नेछ।
९४.आगामी चार वर्षभित्र सबै नेपालीलाई बायोमेट्रिक सूचना र पृथक् पहिचाननम्बरसहितको राष्‍ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। नागरिकका सबै प्रकारका वैयक्तिकविवरणलाई राष्‍ट्रिय परिचयपत्रमा समाविष्‍ट गरी यसलाई सामाजिकसुरक्षासहित सबै सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक सूचनाको आधार बनाइनेछ। प्रत्येक नेपालीकोबैंक खाता हुने सुनिश्‍चित गर्न खोलौं बैंक खाता अभियानलाई तीब्रता दिइनेछ।सबै आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत् गरिनेछ।
९६.यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्यपछि सार्वजनिक परिवहनप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ। सार्वजनिकयातायातका साधनहरूमा यात्रा कार्डको व्यवस्था गरिनेछ। तोकिएको समयमा यात्रा सुरुगरी तोकिएकै समयमा गन्तव्यमा पुग्ने सुनिश्‍चित गरिनेछ। ठूला सार्वजनिक सवारी साधनसञ्‍चालनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
९८.शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा योगदान पुर्‍याउन छुट्टै कोष खडा गरी राष्‍ट्रपतिशैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
१०५.वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्‍ट्रिय गुणस्तरका सबै विशिष्‍टीकृत सेवासहितको उत्कृष्‍टताकोकेन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। आगामी वर्ष भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको अत्याधुनिकभवन निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।
१२९.कृषि उपजहरूको उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणमा सहयोग पुर्‍याउन स्क्रीनहाउस, भण्डार गृह, बिउ प्रशोधन केन्द्र र साना सिँचाइ संरचनाहरूनिर्माण गरिनेछ। कृषि उपज र माटोलगायतका उत्पादनका साधनहरूको गुणस्तर परीक्षणकालागि प्रयोगशालाहरू निर्माण र सुदृढीकरण गरिनेछ।
१३७.जिपिएस प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सवारी साधनहरूको अनलाइनअवस्थिति जाँच गरिनेछ। सार्वजनिक सवारी साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नमुलुकका प्रमुख सहरहरूमा बहुतले बसपार्क निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ।
१४९.मकवानपुरको हेटौंडामा निर्माणाधीन डाटा रिकभरी सेन्टरको निर्माण यसै वर्षसम्पन्‍न गरी सञ्‍चालनमा ल्याइएको छ। सम्भाव्य अन्य स्थानहरूमा थप डाटा सेन्टरनिर्माण तथा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टरको स्थापना गरिनेछ। दूरसञ्‍चार पूर्वाधारमारहेको दोहोरो लगानी कम गर्न पूर्वाधार सहप्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
१५२.हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाइनेछ। आगामी दुई वर्षभित्र देशभित्रैसुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी राहदानी, बैंक नोट, अन्त:शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनीप्रमाणपूर्जा र सार्वजनिक महत्त्वका कागजातहरूको सुरक्षण मुद्रण गरिनेछ।
१५५.मुलुकको धरातलीय स्वरूपमा रहेको भिन्‍नतालाई पर्यटन प्रवर्द्धनमा उपयोगगरिनेछ। तराई-मधेश नजिकका महाभारत क्षेत्रका सम्भाव्य पर्यटकीय स्थानहरूलाई बिदामनाउन उपयुक्त शीतल आवासको रूपमा विकास गरिनेछ।
१६१.विद्यार्थीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्‍त गर्ने सुनिश्‍चितताका लागिसामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई नियमित तालिम प्रदान गर्नुका साथै शैक्षिक सामग्रीहरूकोउत्पादन र वितरणमा जोड दिइनेछ। अध्ययन अध्यापनमा दूरशिक्षा पद्धतिसमेत अवलम्बनगरिनेछ। उद्यमशीलता, मर्यादा रअनुशासनमा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको प्रवर्द्धनमा योगदान गर्नेशैक्षिक प्रणाली विकास गरिनेछ।
१९३. न्यायप्रशासनलाई सरल, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउनकानुनी सुधारलाई निरन्तरता दिंदै न्यायपालिकाको चौथो पञ्‍चवर्षीय रणनीतिक योजनाकार्यान्वयन गरिनेछ। सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच वृद्धि गरिनेछ। हिंसापीडित महिला,एकल महिला, अपाङ्‍गता भएका व्यक्ति,दलित, बालबालिका र ज्येष्‍ठ नागरिक पक्षलाई निःशुल्क कानुनीसहायता उपलब्ध गराइनेछ। सम्बन्धित कानुनमा संशोधन र पदाधिकारीको नियुक्ति गरी सङ्‍क्रमणकालीनन्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्‍न गरिनेछ।
१९७.अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग, अपचलन तथा दोहन र अन्य जुनसुकै आपराधिक कार्यमासंलग्न कुनै पनि व्यक्ति दण्ड सजायवाट उम्‍किन नपाउने गरी निगरानी, अनुसन्‍धान र छानबिन कार्यलाई सशक्त बनाइनेछ।
२०५. आफ्नोजिम्मेवारीमा अलमल गर्ने, काम नगर्ने, अनुशासनहीन, अनियमितता र भ्रष्‍टाचारमासंलग्‍न हुने जोकोहीलाई कडा कारबाही गरिनेछ। राम्रो काम गर्ने पुरस्कृत हुने, काम नगर्ने एवंगैरकानुनी काम गर्ने दण्डित हुने विधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। राष्‍ट्रसेवकहरूलाईप्रदान गरिने सेवा सुविधाको पुनरावलोकन गरी उत्प्रेरित गरिनेछ।
२१०. नेपालकोपरराष्‍ट्र नीति राष्‍ट्रिय हित,पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्‍ट्रिय प्रतिबद्धता तथादायित्व र न्यायमा आधारित हुनेछ। स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता,भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्‍ट्रिय सुरक्षाकायम गर्दै अन्तर्राष्‍ट्रिय जगत्‌मा राष्‍ट्रिय प्रतिष्‍ठाको अभिवृद्धि गरिनेछ। छिमेकी मित्रराष्‍ट्रहरू, विकास साझेदारहरू, श्रमगन्तव्य मुलुकहरूलगायत अन्य सबै मित्रराष्‍ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै राष्‍ट्रियहित अनुकूल बनाइनेछ।
२१५. मेरोसरकारले समृद्धिको आधार वर्षमा प्राप्‍त उपलब्धिहरूलाई समुन्‍नत बनाउँदै आर्थिक,सामाजिक र सांस्कृतिक सबै क्षेत्रको तीब्र विकास गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्‍ट्रिय आकाङ्‍क्षा पूरा गर्ने अठोटका साथ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथाकार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ।
हेर्नुहोस् सरकारको नीति तथा कार्यक्रम :
प्रकाशित : वैशाख २०, २०७६ १८:१३